Oge ọ bụla m si n’ụlọ ọrụ m lọta, karịchaa ma ọ bụrụ na m nọrọ ọtụtụ oge n’ụzọ, ihe mbụ m na-eme bụ ịmụ kandụl. Otu n'ime ihe kachasị m mma bụ kandụl nnu nnu nnu Obi nwayọọ. A nkeji ole na ole mgbe ọkụ ya, M na-eche mara ezigbo mma na… M jụụ.
Ellssì na-akpalitekarị mmetụta uche ma na-akpali ncheta tupu a mata ha. Ha bụkwa ndị na-akpalite mmetụta uche na-adịghị mma the ebe oke mmadụ bụ ndị na-arịa ọrịa nrụgide post-traumatic (PTSD).
Entsì Marketingsì asì bụ ụdị nke mmetụta uche na-eche echiche n'echiche olfactory. Ahịa na-esi ísì ụtọ na-eweta njirimara njirimara nke ụlọ ọrụ, ahịa, ndị na-ege ntị na-ege ntị ma mepụta usoro ịtọ ụtọ nke na-eme ka ụkpụrụ ndị a kawanye elu. A na-emezu nke a site na itinye senti ahụ n'ime ụlọ ahịa ndị ahịa iji metụta omume ndị na-ere ahịa.
Nke na-ewetara anyị ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ. Lọ ahịa na-ere ahịa ugbu a na-etinye ego na sistemụ nnyefe nke na-akpụzi ọnọdụ ndị ahịa ma na-akpalite mmụọ, na-anya ịzụrụ ihe na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa. Dabere na Shopify isiokwu, esi ísì ụtọ amụbaala n'ime ijeri dollar nke na-agafe ọtụtụ ụlọ ọrụ.